Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah!!
Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah!!
8)wax aqri inbadan si aad wax badan u fahamto
Haddii aa doneyso inaad kahormarto dadka asaagaaga ah waxbadan aqri hana kacaajisin weligaa inaad wax badan baarto, aqriso ama aad dhageysato. Haddaba, waxaa iga dar daaran ah si aad ugarto hormarkaaga (facaa intuu soo jeedo soojeed into jiifana sojeed).waxad arki doonta isbadal muhiim ah ama weyn, In sha allah.
9)Soo dhawey guul darradaada
Si aad ugaartid guul waxaad marwalba soodhaweysaa guul darradaada. Isku day inaad mar walbo u adkeysato guul darrada, waayo waxey ku horseedeysaa inaad guuleysato. Hadii aadan guul dareysan maguuleysan kartid oo guusha aad usocotid waxa ku xeeran waxyaabo badan oo loobaahanyahay inaad soo dhaweyso una adkeysato si’aad ugaarto yoolkaaga. Marwalbo oo aad u adkeysato guul darraada waxad abuuratay miri
10) Wax ka eeg dhinaca wanaagsan
Hadii aad rabto inad guuleysatid noqo qof inta badan wax ka eego dhinaca wanaaga si aad ugarto guusha. Sidaan wada ognahay qofka inta badan wax ka eego dhinaca xun wuxuu sifudud uga dhacaa nosha hadii uu kujiray nolol wanaagsan ama mid iftiin ah wuxuu galaa mid mugdi ah. Hadii uu ahaay qof nolosha kaga jiro meel sare wuxuu sifudud ku yimadaa dabaqadaha midka ugu hoseyso.
Ogow hadii aad noqoto qof dhinaca wanagsan wax ka eego oo mar walbo xumaanta dadka ku badalo wanaaga, Allah ayaa kugu badalaayo wanaag iyo kheyr kabadan.
Hadii aad mar walba noqoto qof raadiyo waxa wanaagsan waxaad noqon doontaa mid ey dadku jeclaadaan qaladaadkaaga qaar lagu badalo wanaag illeyn adiga ayaan lagaaga baran xumaan raadis.
Hadabo noqo qof mar walbo wax ka eego dhinaca wanaagsan. Sido kale, wexey kaa saacideysaa inuu ku soo haro waqtigii aad ku bixin laheed raadinta xumaanta oo aad uga faa’iideysto raadinta mustaqbal wanagsan ama waxyaalo kheyr kujiro sida (inaad cibaado badan sameysato, soonto, tasbiixsato,) kuwaas oo adiga fa”ido kuugu jirto.
11) Sidee loo noqodaa qof wax badan baara?
Dhab ahaantii waxaan jecelnahay inaan mar walbo wax baarno laakiin inta badan dadkeena wax mabaaraan.
Xiligaan hadda lajoogo waan kanasiib badanahay umadihii naga horeeyay marka laga eego dhinaca helitaanka cilmi badan, maxa yeelay iyaga waxaa ku adkaan jirtay raadinta cilmiga. Tusaale ahaan waxaa jirtay xiligii saxaabada ina hal xadiis loo radiin jiray dal ka dal ama maasaa fooyin fog fog. Balse anag xiligaan lajoogo waxaan haysanaa fursado badan waayo hada cilmi walbo oo aad ubaahantahay waxaad heleysaa adigoo jooga gurigaaada waxaa siiyaraneso marba marka kadambeyso inaad meelo dhaadheer uraadiso cilmi. Tusaale ahan hadda lataaganyahay cilmigii oo idil liiskugu keenay Aallada casriga ah ee loo yaqaano (internetka).
12) Waqti laqaado dadka ku taageersan iyo kuwa aan ku tageersaneen.
Wax kasii waqtigaada si aad uga faa’ideysato fik radahooda dadkaas kala duwan si ey kaaga saacidaan wax badan inaad uga faa”ideysato fursadooda lakulanka ah maadaama wax badan oo kaa qaldanay lagayaabo inaad lahortagtid laheed bulsho badan oo lagugu dhaliili lahay. waxa hubaal ah in hadii la’isdhaaf sado fikrado kala duwan ey meesha kasoo baxeyso cilmi iyo aqoon badan oo dhexdiina ku jirtay. Waxa hubaal ah in hadii qodobadaa kor kusoo xusnay ku dabaqdo noloshaada aad gaari doonto si dhaqsi ah guushaada . Ugu dambeynti is xisaabi nafsadaad maalin kasto.
Previous PostWar Deg Deg Ah: Mid kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo goordhaw tanaasulay Waa Kumma? Next PostDAAWO MUUQAAL Nabadoon Soomaali oo ay jirdileen Ciidanka Itoobiyaanka!!